N'ogbe Polycarboxylate Ether Monomer HPEG / TPEG ụlọ ọrụ na-emepụta | Gaoqiang
Polycarboxylate ether dị elu nso mmiri reducer bụ nke atọ ọgbọ superplasticizer dabere na calcium lignosulphonate na naphthalene sulfonate. SUNBO PC-1030 bụ n'efu na-asọ, na-agba ntụ ntụ nke na-eme ka ọ dị mma site na ntụ ntụ pụrụ iche na-agbapụta teknụzụ akọrọ.
Aha: isopentenyl polyoxyethylene ether
Nhazi usoro: CH = C (CH) CHCHO (CHCHO) nH
Klas: nonionic surfactant
Aha: methallyl polyoxyethylene ether
Usoro Molekụl: CH = C (CH) CHO (CHCHO) nH
:Dị: Nonionic surfactant
Ihe ngosi anụ ahụ na nke kemịkal
PH (5% mmiri mmiri)
Enweghi afọ ojuju
Uru Hydroxyl, mgKOH / g
PEG ọdịnaya (%)
Ugboro abụọ njigide njigide (%)
Performance na Ngwa:
1. Ngwaahịa a anaghị egbu egbu, anaghị ewe iwe, nwere ezigbo mmiri mmiri, na-agbaze mmiri na ihe dị iche iche na-edozi ahụ, ọ bụkwa ihe dị mkpa maka ọgbọ ọhụrụ nke igwe na-arụ ọrụ dị elu.
2. Mkpokọta ịdị arọ nke ngwaahịa a dị warara, ọdịnaya nke polyethylene glycol dị obere, ọnụego njigide nke agbụ abụọ dị elu, na ọrụ polymerization na-abawanye nke ọma. Ọnụego ntụgharị nke ngwaahịa a dị elu. Omume zuru oke nke onye ọrụ ahụ dị mma. \_
3. Onye na-ebelata mmiri na-emepụta ihe nke ngwaahịa a nwere arụmọrụ dị elu na arụmọrụ na njigide, ma nwee mmetụta mgbasa dị mma n'ọtụtụ ihe ntụ dị ka ciment. Ọ nwere nnukwu mmiri na-ebelata ọnụego na obere ciment ojiji. Ogo nke ciment gbakwunyere bụ 0.2% -0.5% Ihe nkedo mmiri, mbelata mmiri nwere ike iru karịa 30%.
4. Mgbe ị gbakwunye mmiri na-ebelata mmiri na ihe, a na-emepụta ihe nkiri adsorption n'elu nke ciment ahụ, nke na-eme ka ọnụọgụ mmiri nke ciment belata, na-eme ka uto nke nkume nkume ciment zuru oke, na-ebelata ihe mkpuchi mmiri evaporation, na netwọk Ọdịdị bụ ihe ok, nke nwere ike melite ihe The osisi ike bụ karịa 20%. Enwere ike itinye ya na nnukwu ike (karịa C60) azụmaahịa azụmahịa.
5. Mmiri na-ehichapụ gị n'ụlọnga synthesized site na ngwaahịa a nwere ike ukwuu melite rheology na plasticity nke ihe. Ọ nwere ike iru ihe owuwu site na ntinye onwe, mgbapụta, na enweghị mkpọtụ, nke nwere ike ịbawanye ọsọ ihe owuwu ma belata ụgwọ ihe owuwu.
6. Ngwaahịa a bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na gburugburu ebe obibi enyi na enyi, chloride ion ọdịnaya: -0.1%. Na-agbaso ụkpụrụ njikwa nchekwa gburugburu ụwa ISO14001.
1. Ngwaahịa a nwere ezigbo mmiri mmiri.
2. Ngwaahịa a na-eji ihe nnabata na-arụsi ọrụ ike na usoro njikọ pụrụ iche. Mkesa molekụla dị oke warara, ọdịnaya ethylene glycol pere mpe, ọnụọgụ njigide okpukpu abụọ dị elu. A na-emeziwanye ọrụ polymerization, ọnụego mgbanwe ngwaahịa dị elu, ngwaahịa polycarboxylic acid reducer ngwaahịa nke ngwaahịa ahụ mepụtara nwere ọdịnaya dị elu dị elu, na onye na-eweta mmiri nwere arụmọrụ zuru oke.
3. Ọrụ na mma index nke sịntetik mmiri reducer:
1) costrụ ọrụ dị elu. N'ihe banyere iru otu ọnụego mbelata mmiri, ọ nwere arụmọrụ dị elu.
2) Obere udiri ala na oke mbelata mmiri. Mmiri na-ebelata ihe ọ motherụ motherụ nke nwere mmanya nwere ihe siri ike nke 20% na ọnụọgụ mmiri na-ebelata 1.0% (ọnụọgụ simenti) nwere ike iru 30-35%.
3) Ezigbo njigide plasticity. Nke slump ọnwụ nke ihe mgbe 1h bụ obere.
4) Ezigbo ogologo oge. Nwere ike belata mmiri oriri ma melite ogo ndụ nke ihe.
5) Green na nchekwa gburugburu ebe obibi. Na usoro mmeputa nke onye na-ewepu mmiri, a naghị eji formaldehyde na chloride ion na-emerụ gburugburu ebe obibi, ọdịnaya nke sulfate dịkwa obere.
ihe mpempe siri ike bụ 25KG / bag;
60% mmiri mmiri n'ụlọnga: 1000 n'arọ / drum, nnukwu mmiri, akpa mmiri mmiri akpa
Ationgbọ njem na Nchekwa:
Ngwaahịa a bụ nke na-adịghị egbu egbu, na-enweghị isi, nke na-enweghị ọkụ, na-echekwa nchekwa kemịkal na njem. Na-echekwa na ụlọ nkwakọba ihe dị jụụ, akọrọ na ventilated.
otu afọ (nchekwa a kara akara na ime ụlọ okpomọkụ)
Nke gara aga: Sodium Gluconate
Osote: JS -103 Polycarboxylate superplasticizer 50% (High Water mbenata ụdị)